Vaovao - Fitaovana fanaovana milina CNC mihoatra ny fanapahana
Fitaovana fanaovana milina CNC mihoatra ny fanapahana
Amin'ny fanodinana, matetika eo an-joron'ny antsy lohataona ary mitarika ny fisehoan'ny fanapahana, raha toa ka mampihena ny fahafahan'ny antsy lohataona ny fampiasana fitaovana mety sy fomba fanodinana.
Ny fifandraisan'ny fanovana fitaovana dia:
Avy amin'ny raikipohy etsy ambony, azontsika atao ny mahafantatra fa misy antony telo lehibe misy fiantraikany amin'ny fahasimban'ny fitaovana:
L - Ny halavan'ny antsy
D - savaivony fitaovana
P - Ny hery nampihatra ilay fitaovana
Araka ny raikipohy, ny fahasimban'ny fitaovana sy ny halavan'ny fitaovana fampidinana dia ny fifandraisan'ny herin'ny 3, ny savaivony mitovy amin'ilay fitaovana, rehefa nitombo avo roa heny ny fitaovana lava dia hitombo in-3 ny fiovana.
Mandritra ny fizotrany, araka izay azo atao mba hanafohezana ny halavan'ilay antsy fametahana, mba hampihenana ny mety ho antsy antsy.
Hita avy amin'ny raikipohy fa ny fiovan'ny fitaovana sy ny savaivon'ilay fitaovana dia ny fifandraisan'ny herin'ny fahefatra, ny halavan'ny fitaovana ihany, rehefa mihena in-droa ny savaivon'ny fitaovana dia hitombo efatra ny fihenany fotoana.
Amin'ny fanodinana, raha azo atao, araka izay azo atao, misafidy fitaovana lehibe savaivony na mampiasa fitaovana matanjaka handrindrana, mba hampihenana ny mety ho antsy antsy. (Araka ny hita eo amin'ny sary eo ankavanana etsy ambany: A dia mampiasa tariby hafanana sy antsy vozona vozona, B dia mampiasa fitaovana misy fehin-tànana matanjaka hiomanana)
Hita avy amin'ny raikipohy fa ny fiovan'ny fitaovana dia mifanitsy mivantana amin'ny hery azony ao anatin'ilay dingana. Ny fampihenana ny herin'ny fitaovana dia mety hampihena ny fahafahan'ny antsy antsy. Ny herin'ny fitaovana amin'ny fizotrany dia azo ahena amin'ny fomba manaraka.
Fanadihadiana fampihenana ny hery:
Ny fanapahana dia dingana iray amin'ny famoahana volo. Ny fitaovana tsirairay dia samy manana ny tanjany (σ). Mba hampisarahana ny fitaovana, ny hery ivelany dia tsy maintsy lehibe kokoa noho ny tanjaky ny fitaovana.
σ: Herin'ny fitaovana iray
S: Faritra fifandraisana
Hita avy amin'ny rijan-teny etsy ambony fa ny hery (F) amin'ilay fitaovana dia mira lenta amin'ny faritra misy ny fifandraisana (S) miaraka amin'ilay zavatra ampiasaina.
Ohatra mahery 1:
Ampiasao ny làlan'ny fitaovana Angle function na ny fomba fampitomboana ny toeran'ny R mba hampihenana ny enta-mavesatry ny fitaovana amin'ny toeran'ny Angle, mba hampihenana ny mety ho antsy lohataona.
Ohatra mihena 2:
Amin'ny fanodinana toerana lalina, dia afaka mampiasa feed kely sy fitaovana R Angle tsara, mba hampihenana ny fanodinana ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny hery, hampihenana ny mety ho antsy antsy.
Ity sary manaraka ity dia ny fampiasana antsy D50R6 sy antsy D50R0.8 amin'ny halalin'io fanodinana io ihany, ary ny fampitahana ny teboka fifandraisana amin'ny maty, ny fampiasana fitaovana R Angle tsara fanodinana workpiece lalina noho ny fitaovana R Angle lehibe afaka mampihena ny hery fanapahana .
Amin'ny alàlan'ny fampiharana feno ireo lafin-javatra telo misy fiatraikany amin'ny fahasimban'ny fitaovana (ny halaviran'ny fitaovan'ny fitaovana, ny savaivon'ny fitaovana ary ny hery fanapahana) dia azo ahena ny fahafaha-mitombo fitaovana, ny fotoana fanodinana azo hatsaraina, ary ny fahamendrehan'ny milina sy ny fahasarotan'ny tarehiny dia mety ho tsara kokoa.
Fotoana fandefasana: Aug-11-2021